तिमीले ठीक भनेकी थियौ– मालिनी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
तिमीले ठीक भनेकी थियौ– मालिनी
भाद्र २८, २०७६ ब्रजेश
उसले एकदमै सहज रूपमा भनी, ‘खासै केही छैन । भट्ट साहबको एउटा नयाँ सिनेमा साइन गरेकी छु । नायिकाको रूपमा ।’ ‘भट्ट साहब... ? मतलब... महेश भट्ट ?’ मैले पक्का गर्न चाहें । ‘हो ।’ मानौं ऊ कुनै कार्यालयमा सहायकको जागिर पाएको कुरा गर्दै थिई ।
अन्नपूर्ण होटलको लबी पार गरेर पछाडि गार्डेनमा पुगेपछि मैले चारैतिर आँखा डुलाएँ । त्यहाँ भएका छिटपुट मानिसहरूमा मेरा आँखाहरू सर्सरी बरालिए पनि कसैमा फोकस भइरहेका थिएनन् । अलि पर एउटा ठूलो बगैंचे पिङमा बसिरहेको आकृतिमा पुगेपछि चाहिँ मेरा आँखाहरू स्वयं टक्क अडे । त्यो आकृति एउटी युवतीको थियो । अघिल्लो दिन फोनमा कुरा भएर समय तय भएअनुसार म जसलाई भेट्न आएको थिएँ, त्यो ऊ नै मात्र हुन सक्थी । अरू त कोही पनि भारतीय युवती थिएनन् । मैले तैपनि पक्का गर्न खोजेर उसलाई परैबाट नियालेर हेरें । ऊ दुवै गोडा पिङमा माथि फैलाएर एक छेउमा अडेस लागेकी थिई । मेरा आँखाहरू फोकस मिलाउन थाले । फोकस मात्र किन, जुम नै गरेर उसलाई नजिकबाट हेर्न चाहन्थे मेरा आँखाहरू । तर, जति चाहे पनि मानिसका आँखा कहाँ जुम हुन्छन् र ? तसर्थ अब मेरा पाइलाहरू ऊ भएतिर अग्रसर भए । त्यसै पनि सिनेमाको सन्दर्भमा भनिन्छ, जुम गर्नुभन्दा ट्रलीमा राखेर क्यामरालाई नै पात्र वा वस्तुको नजिक लगेको राम्रो हुन्छ । जसै म उसको नजिक–नजिक हुँदै गएँ, ती युवतीलाई अझै राम्ररी देख्दै गएँ । टाढाबाट हेक्का नभएका अरू डिटेलहरू झनै स्पष्ट हुन थाले ।
उसले कालो रङको टाइट्स लगाएकी थिई । माथिबाट ह्वार्लाङ्ग परेको खरानी रङको लामो स्वेटर भिरेकी थिई जुन उसको कम्मरभन्दा केही तलसम्म पुग्ने थियो । त्यसले उसको लामा र बान्की परेका खुट्टाहरूलाई लुकाउन सकेको थिएन । उसको कपाल घुम्रिएको र कुमसम्म आइपुग्ने थियो । पक्कै डाई गरिएको हुनुपर्छ किनभने त्यसमा पछाडिबाट परेका सूर्यका किरणहरूले एक प्रकारको सुनौला आभा छरिरहेका थिए । ऊ गोरी थिई । मेरा पाइलाहरू अझै अघि बढिरहेका थिए तर उसलाई भने अझै पनि कोही आफूतिर आइरहेको आभास भइसकेको थिएन । मैले देखें, उसको काखमा कुनै एउटा अंग्रेजी किताब खुलेको थियो । ऊ त्यसैमा तन्मय भएर डुबिरहेकी थिई । अब त म झन्डैझन्डै उसको छेउमै पुगिसकेको थिएँ ।
उसलाई आफ्नो छेउमा कोही आएको थाहा भयो । उसले पुलुक्क मलाई हेरी । उसका आँखाहरू म अझै स्पष्ट सम्झिन्छु । उसका आँखाहरू ठूलाठूला थिए । अनि गहिरा थिए ती आँखाहरू । महासागरजस्तै । अलि बेर हेरिरह्यो भने कसैलाई पनि आफ्नो अथाह गहिराइमा चुर्लुम्मै पार्न सक्ने मारियाना ट्रेन्च थिए ती आँखाहरू । अहिले नै बोल्लान् भनेजस्ता ती आँखाहरूमा उसले हल्का लाइनर मात्र लगाएकी थिई । तर प्रश्नवाचक भाव लिएर मतिर हेरिरहेका ती आँखाहरूमा किन हो किन मलाई एक किसिमको उदासी देखेजस्तो लाग्यो । के मेरो भ्रम थियो ? मैले मुसुक्क हाँसेर आफ्नो नाम भनें । ऊ पनि मुस्काउँदै पिङबाट उठी । उसका आँखाहरू पनि हाँसे । उसको भारबाट मुक्त भएको पिङ हलुकासँग अघिपछि गर्न थाल्यो । कि आफूलाई उसले छोडेकोमा प्रतिवाद गरेको थियो त्यो पिङले ? उसले मतिर हात बढाउँदै भनी, ‘हेलो । नाइस अफ यू टु कम ।’
हामीले हात मिलायौं । उसको हात कोमल, मुलायम र न्यानो थियो ।
मलाई त्यति बेला के थाहा म दिनको झलमल्ल उज्यालो मै एउटी यस्ती युवतीसँग हात मिलाइरहेको छु, जो चाँडै भूत बन्दै छे, प्रेतात्मा ।
त्यति बेला नेपालमा भर्खर एफएम आएको थियो र निकै लोकप्रिय थियो । रेडियो नेपालले १०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा त्यसको प्रसारण गर्थ्यो र त्यही एउटा मात्र एफ एम थियो । निजी प्रदायकहरूलाई बेचिएको समयमा हिट्स, म्युजिक नेपाल, क्लासिक र गुडनाइटजस्ता संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे । म म्युजिक नेपाल एफएमको कार्यक्रम प्रबन्धक र सञ्चालक पनि थिएँ । मसँग रवि लामिछाने, मीरा आचार्य, ममता दीपबिम, अर्चना प्रधान, प्रदीप भट्टराई र अमोददेव भट्टराईको समूह थियो । म्युजिक नेपाल आफैं गीत–सङ्गीत प्रकाशन गर्थ्यो । अर्थात् क्यासेट तथा पछि सीडीका रूपमा । त्यति बेला क्यासेटको बजार उर्वर थियो । फलतः मास्टर रेकर्डिङ, सनराइज, सान्तानालगायतका थुप्रै क्यासेट निर्माताहरू पनि बजारमा हाम्फालिसकेका थिए । अहिले पुस्तक बिक्छ भनेर होलसेलमा प्रकाशकहरूले होलसेलमा पुस्तकहरू छापेजस्तै थियो त्यतिबेलाको क्यासेट बजार । हाम्रो कुनै पनि व्यापार ठूलो पोखरीमा माछाको भुरा छोडेजस्तो हुने गर्छ । जो जो टिके, बाँचे, मोटाए तिनको बिक्रीबाट कुस्त आम्दानी भइहाल्यो । जो जो डुबे, तिनको लगानी मोटाएकाबाट उठिहाल्छ । म्युजिक नेपालको भागमा परेको अपराह्न तीनदेखि चार बजेको समय आफ्नै क्यासेटहरूको विज्ञापनका लागि प्रयोग गर्ने नीति थियो ।
त्यही बेलातिर एउटा एल्बम निस्केको थियो, जीवन भाग दुई । त्यो लोकलयमा आधारित गीतहरूको नै संकलन थियो । त्यसका गायक थिए खेमराज गुरुङ जो त्यति बेलासम्म चर्चित थिएनन् । तर उनको स्वरमा एउटा अनौठो ओज थियो । मोटाघाटा र खाइलाग्दो ज्यानका खेम निकै फरासिला र नम्र थिए । त्यस एल्बममा एउटा गीत थियो जसले कालान्तरमा नेपाली गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा एक प्रकारको क्रान्ति ल्यायो ।
‘वारि जमुना, पारि जमुना, जमुनाको फेदैमा मनकामना’
हामी एफएममा त्यस गीतलाई खुब बजाइरहेका थियौं । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सुरुमा जीवन भाग दुई नामको त्यो एल्बम र वारि जमुना भन्ने गीत दुवै बजारमा चलेका थिएनन् । तर कुनै एक कार्यक्रममा त्यसमा गरिएको नृत्य नेपाल टेलिभिजनमा देखाइएपछि अचानक एकै पटक मानिसहरूको ध्यान त्यसले तान्यो । हेर्दाहेर्दै वारि जमुना हरेक औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा नाच्ने गीत बन्न थाल्यो । विद्यालयका सांस्कृतिक कार्यक्रम, बिहे–व्रतबन्धको भोज, दोहोरी रेस्टुराँ, साथीभाइको साँझपख हुने टिन्चुपानीको जमघट, घर, रेडियो, टीभीलगायत कुनै पनि स्थानमा वारि जमुना अपरिहार्यजस्तै भयो । पूर्वेली लोकभाका त्यसै पनि बडो मादक हुन्छ । वारि जमुनामा प्रयोग भएको मन्ध्रतालका कारण त्यो कुनै पनि मानिसले सजिलैसँग अलिअलि हल्लिएर वा खुट्टा चलाएर पनि त्यसमा निकै बेर नाचिरहन सक्छ । सङ्गीतका विशेषज्ञहरू त्यो गीत त्यसरी चल्नुमा सम्भवतः त्यही कुरा प्रमुख कारण हुनुपर्छ भन्ने गर्छन् । अहिलेको जस्तो सामाजिक सञ्जालको युग भएको भए त झन् त्यसले के गर्थ्यो होला भन्ने कल्पनै गर्न सकिन्नथ्यो । बजारमा त्यो क्यासेटको माग पुर्‍याउन धौ–धौ हुन थालेको थियो । वारि जमुनाले खेमराज गुरुङलाई हेर्दाहेर्दै निकै ठूलो स्टार बनाइदियो । तापनि उनमा अहंको अंश रत्तिभर पनि चढेको थिएन । खेमसँग एउटा कार्यक्रमका लागि धरान पुगेको बेला त्यहाँ मैले उनको क्रेज प्रत्यक्ष देखेको छु । एक बजे दिउसो सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा सञ्चालकले बीचबीचमा ‘अब केही बेरमा खेमराज गुरुङको प्रस्तुति हुनेछ’ भन्दै दर्शकहरूलाई रातिको साढे एघार बजेसम्म फकाएर राखेका थिए । भनिरहनु नपर्ला, सबै दर्शक उनकै लागि त्यत्रो समय आतुर भएर कुरेर बसेका थिए । उनी स्टेजमा गएपछि नाच्थे, आफूसँग सबैलाई नचाउँथे तर अरू बेला उनी असाध्यै लजालु स्वभावका थिए । मैले उनको एल्बमको एउटा गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेको थिएँ । हामी कुरिनटार नजिक त्रिशूलीको बगरमा त्यसको छायांकन गर्दै थियौं । त्यही क्रममा एकपटक नायिकाको कम्मरमा हात राख्न पर्दा खेम कानसम्म रातो बनाएर आत्तिएका थिए । उनले मलाई एउटा कुनामा लगेर सानो स्वरमा सोधेका थिए, ‘दाइ, यस्तो गर्नैपर्छ र ?’
खोलाको चिसो पानी भन्ने गीतको भिडियोमा त्यो ‘सट’ नियालेर हेर्ने हो भने अहिले पनि उनको त्यो अप्ठ्यारो स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।
म त्यस दिन एफएम कार्यक्रममा बज्ने गीतहरू छान्दै थिएँ । खेम स्याँस्याँ गर्दै आए । थचक्क अगाडिको सोफामा बस्दै भने, ‘दाइ, तपाईंको एउटा सहयोग चाहियो ।’
भारतीय टीभी च्यानल जीको एउटा गीत–सङ्गीतसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम नेपालमा छायांकन गर्न आएको रहेछ । उनीहरूले यहाँ त्यति बेला वारि जमुनाको क्रेज देखेपछि त्यसका गायकसँग सानो अन्तर्वार्ता गर्न चाहेका रहेछन् । त्यसैका लागि म्युजिक नेपालमा सम्पर्क गरेका रहेछन् । रिसेप्सनमा बस्ने पुष्पा बहिनीले पछि फोन गर्न भनेर खेमलाई बोलाइदिएकी रहिछन् । केही बेरमा जीटीभीवालाहरूको फोन आउने थियो । खेमले लजाउँदै भने, ‘मैले के भन्नु ? तपाईंले नै एक पटक कुरा गरिदिनुस् न ।’
फोन आएपछि मैले कुरा गरें । उनीहरू अन्तवार्ताका लागि आउन चाहन्थे । म्युजिक नेपालको कार्यालय अनामनगरको घुमाउरो गल्लीभित्र अप्ठ्यारो ठाउँमा थियो । फेरि नेपालको सबैभन्दा ठूलो सङ्गीत प्रकाशन संस्था भनेर भारतीय टीभीमा देखाउनेजस्तो न भवन थियो न कार्यालय । त्यसैले उनीहरू बसेकै अन्नपूर्ण होटलमा अन्तर्वार्ता खिच्ने कार्यक्रम मिलाइयो । त्यसपछि त खेम झनै लजाएर भन्न थाले, ‘मलाई अंग्रेजी र हिन्दी दुवै बोल्न खासै सजिलो लाग्दैन । के कुरा गर्नु ?’
मैले भनें, ‘भाषाले केही हुँदैन खेमजी । हात्ती अंग्रेजी वा हिन्दी बोलेर ठूलो भएको हो र ? संसारका अरू ठूला गायकहरू पनि आफ्नो भाषामा अन्तर्वार्ता दिन्छन् । यसलाई सहज रूपमा लिनुस् ।’
उनी बल्लबल्ल माने तर भन्न थाले, ‘तपाईं पनि मसँग हिँड्नुस् है त त्यसो भए ।’
मैले सहमति जनाएँ । यसरी म आवश्यक परेको अवस्थामा खेमको दोभाषेको रूपमा अन्नपूर्ण होटल पुगेको थिएँ र ती आकर्षक र सुन्दरी युवतीसँग हात मिलाइरहेको थिएँ ।
खेमसँग उनीहरूको कुराकानी सकिएपछि ती युवती र म केही बेर गफियौं । त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि उसले बम्बै भाइकिङ भन्ने ब्यान्डको एउटा गीतको म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी रहिछ । उसले गीतको बोल भनेपछि मलाई अलिअलि त्यसको सम्झना आयो । ‘क्या सुरत है क्या सुरत है’ भन्ने त्यो गीत एकताका चर्चित भएको थियो । केही समय अघि जीटीभीकै झन्डु फिल्मी बातें भन्ने कार्यक्रम नेपालमा छायांकन हुँदा त्यसको केही भाग मैले सञ्चालन गरेका थिएँ । यिनै सेरोफेरामा कुराकानी हुँदा उसले भनी, ‘मलाई नयाँ कामहरू गर्न मन लाग्छ । गीतमा मोडलिङ र टीभीमा कार्यक्रम सञ्चालनबाट म अघाइसकेकी छु ।’
‘अब के गर्ने योजना छ त ?’ मैले सोधें ।
उसले एकदमै सहज रूपमा भनी, ‘खासै केही छैन । भट्ट साहबको एउटा नयाँ सिनेमा साइन गरेकी छु । नायिकाको रूपमा । केही समयमा त्यसको छायांकन हुन्छ ।’
‘भट्ट साहब... ? मतलब... महेश भट्ट ?’ मैले पक्का गर्न चाहें ।
मानौं ऊ कुनै कार्यालयमा सहायकको जागिर पाएको कुरा गर्दै थिई । बम्बै सिनेमाको प्रतिस्पर्धात्मक संसारमा अवसर पाउनु भनेको त्यति साधारण कुरा कहाँ हो र ?
‘अनि यो कुरा सुनाउँदा तिमी किन पटक्कै उत्साहित छैनौं त ?’ मैले अचम्म मान्दै सोधें ।
उसले कुम उचाल्दै सहज रूपमा भनी, ‘उत्साहित हुनुपर्ने कुरा के छ र ? मलाई अफर आयो, अनि मैले एउटा नयाँ अनुभव हुन्छ भनेर हुन्छ भनें । बुझ्यौ, त्यो सिनेमा चले पनि नचले पनि म फेरि अर्को सिनेमाचाहिँ खेल्दिनँ ।’
मैले केही बेर उसलाई अनपत्यारिलो आँखाले हेरें । हुन त ऊ आकर्षक थिई, राम्री थिई । तर के साँच्चै त्यति ठूलो ब्यानरको सिनेमा पाएकी नै होला त ? मैले सुनेको, पढेको र अलिअलि संगत गरेको आधारमा बम्बैका अधिकांश मानिस, विशेषगरेर सिने नगरीकाहरू महागफाडी हुन्छन् । उनीहरूको भाषामा भन्दा फेँकु । अलिअलि भएको कुरा पनि यति बढाइचढाइ विश्वासिलो हिसाबले गर्न खप्पिस हुन्छन्, सुन्ने मान्छेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन् । त्यति मात्र पनि कहाँ हो र, हुँदै नभएको कुरासमेत उनीहरूले सुनाउँदा साँच्चै हो भन्ने विश्वास लाग्छ । बम्बैको पानीमा नै केही अनौठो रसायन छ जसले मानिसलाई त्यस्तो बनाउँछ होला । मलाई ऊ पनि त्यस्तै नै लागी । त्यतिबेला मैले लख काटें, ऊ कुनै भारेभुरे भूमिकामा अनुबन्धित भएकी हुनुपर्छ । नत्र महेश भट्टको सिनेमामा नायिका बन्न लागेकी युवतीले त्यति सहज रूपमा त्यो भन्दैनथिई होला । उसको अनुहारमा त्यसको कुनै उत्साह नै नहुनु भनेको सम्भव कुरा होइन । केही बेर अरू यता उतिका कुरा भए र हाम्रो भेट टुंगियो । ऊ माया नगरी फर्केर गई । केही समयसम्म बेलाबेला उसको सम्झना आउँथ्यो जुन बिस्तारै धमिलो–धमिलो हुँदै अन्ततः मानसपटलबाट बिलायो ।
त्यसको करिब वर्ष डेढ वर्षपछि, म यसै टेलिभिजनका च्यानलहरू फेरिरहेको थिएँ । अचानक एउटा च्यानलमा म अडें । नयाँ आउन लागेको कुनै सिनेमाको प्रोमो चल्दै थियो । एउटा सुन्दर पहाडी बस्ती, ठूलाठूला रूखहरू, झरीको मौसम । पछाडि उडिरहेको बाक्लो भुइँ कुहिरो । एउटा मोटो रूखको आडमा कालो लुगा लगाएकी एउटी युवती । उसको एउटा हातमा भ्वायलिन छ । अर्को हातमा भएको बो ऊ भ्वायलिनमा रेटिरहेकी छ । मीठो हुँदाहुँदै पनि मुटु नै छेड्लाजस्तो धुनसँगै एउटा गीतको टुक्रा सुनिन्छ, जसको भावले भन्छ, ‘म तिम्रो मायामा सिंगारिन थालेकी छु...।’
अब उसको अनुहार पनि देखिन्छ, क्लोज अपमा । म झसंग हुन्छु । ऊ त त्यही युवती हो । मालिनी शर्मा । अचानक अन्नपूर्ण होटलमा भएको भेट र कुराकानी सुकिसकेका सम्झनाका पलहरू दुबोमा पानी छर्किए जसरी ताजा र हरियो भएर आउँछन् । सिनेमाका लागि गरिएको मेकअप, प्रकाश संयोजन र लेन्सको अगाडि जोडिएका फिल्टरका कारण केही भिन्न, अझ चम्किलो तर केही अप्राकृतिक रूपमा बाहिरभन्दा अझ बढी सुन्दर पनि देखिइएकी थिई । ‘राज’ भन्ने उक्त चलचित्रका प्रोमोहरू त्यसपछि त धमाधम आउन थाले । साँच्चै त्यसका दुईमध्ये एक नायिका रहिछ मालिनी । उसले मसँग सहज रूपमा भए पनि भएकै कुरा गरेकी रहिछ । तर मैले पत्याएको थिइनँ । धेरै गफाडीको संगत गरिसकेपछि कसैले सत्य बोल्दा पनि विश्वास नलाग्ने हुँदो रहेछ । सबै बम्बैया फेंकु हुँदैन रहेछन् ।
अन्ततः राज प्रदर्शन भयो । त्यो हरर विधाको सिनेमामा मालिनी भूत रहिछ, एउटी प्रेतात्मा । भूत भए पनि सिनेमा हेर्नेहरूको उसप्रति सहानुभूति भयो ।
ऊभन्दा पहिले नै सिनेमामा नाम बनाइसकेकी स्थापित नायिका विपाशा वसुको भन्दा बढी मालिनीको चर्चा हुन थाल्यो । चलचित्र पनि त्यस वर्षको ठूलो हिटमा दरियो । मालिनीले निकै सशक्त अभिनय गरेकी थिई । आम दर्शक त भइहाले, समीक्षकहरूले पनि उसको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरे । त्यस वर्ष नवनायिकाको लागि दिइने पुरस्कार पनि उसकै पोल्टोमा खस्यो । मालिनी शर्मा रातारात निकै ठूलो स्टार बनिसकेकी थिई । कुनै चलचित्र हिट भएपछि त्यससँग आबद्ध सबैको खोजी बढ्छ, बजार बढ्छ र भाउ पनि बढ्छ । उसलाई पनि अरू सिनेमाका प्रस्तावहरूको ओइरो लागे । तर मालिनीले साँच्चै नै त्यसपछि कुनै सिनेमामा अभिनय गरिन् । बम्बैको मायानगरीको चमकले तानिएर भनिन्छ, हरेक दिन हजारौं युवा युवती आइरहेका हुन्छन् । अवसरहरूको सहर भनिए पनि उपलब्धिका लागि भने उनीहरूले कठिनभन्दा कठिन संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यो मानवसागरमा अधिकांश हराउँछन् । वर्षौंको संघर्षपछि पनि निकै थोरैले मात्र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् । मालिनीले पहिलो सिनेमाबाटै पाएको जस्तो सफलताको आशामा अधिकांश त कुनै चाल भनिने अँध्यारो र साँघुरो बस्तीमै निभेर जान्छन् । तर त्यस्तो दुर्लभ सफलतापछि आएका जति सबै प्रस्ताव उसले लत्याइदिई । उसले हात परेको ब्ल्यांक चेक साट्ने रहर देखाइन । बरु खासै नजमेका कुनै एक अभिनेतासँग बिहे गरी भन्ने समाचारहरू आए । त्यो बिहे पनि धेरै नटिकेर सम्बन्धविच्छेद भएपछि भने मालिनी साँच्चै नै चकाचौंधको संसारबाट हराई । हरेक शुक्रबार नयाँ स्टार जन्मिने बम्बैमा उसको खोजीनीति कसले गरिरहोस्, कहिलेसम्म गरिरहोस् । ऊ पत्रिकाका पाना, टीभीका काँच र मानिसहरूको मथिंगलबाट पनि बिस्तारै फुङ्ग उडेर बिलाई । मेरो पनि । तर कहिलेकाहीं अनायास कतै ‘राज’ को त्यो गीत सुनिन्छ,
‘आप के प्यार में हम सँवरने लगे....’
त्यस्तो बेला बादलका भुवाहरू आकाशमा उडेर आए जसरी उसका सम्झनाहरू आउँछन् । मालिनी शर्माले त्यो छोटो भेटमा मलाई भनेको कुरा सम्झिन्छु, ‘बुझ्यौ ? सफलता र असफलता भनेको सब सतही कुराहरू हुन् । आफूले कसरी लिने भन्ने कुरा मात्र हो । यी सबको केही अर्थ छैन । के खुसी हुनका लागि स्टारडम नै चाहिन्छ र ? त्यसका लागि मानिसले आफ्ना अरू हजारौं कुरासँग सम्झौता गर्नुपर्छ । आफूलाई के गर्न मन लागेको छ, त्यही गर्न पायो भने मात्र मान्छे खुसी हुन्छ । मेरा सपनाहरू ठूला छैनन् । खुसी हुनका लागि चाहिने कुरा साह्रै सानातिना हुन सक्छन् । त्यो हामी बिर्सन्छौं ।’
हो मालिनी । तिमीले ठीकै भनेकी थियौ । बाँच्ने भनेकै आफ्ना लागि हो । तर हामीमध्ये कति जनामा त्यसो गर्न सक्ने आँट हुन्छ ? हामी त अरूका लागि बाँचिरहेका हुन्छौं । महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकताको झिनो अन्तर बुझ्न नसकेर जीवनपर्यन्त एउटा यस्तो भोकको दौड प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छौं, जसको कुनै अन्त्य नै हुँदैन । अनावश्यक ठूला कुराहरूको खोजीमा यसरी भौंतारिन्छौं, आवश्यक साना कुराहरू देख्दा पनि देख्दैनौं । तिमीआज कहाँ, के गरिरहेकी छ्यौ भन्ने मलाई थाहा छैन । कसैलाई पनि थाहा छैन । अरू त कुरै छोड मालिनी, गुगल पनि अन्योलमा रहेछ । तर म आशा गर्छु, जहाँ भए पनि तिमी सायद आफूलाई खुसी लाग्ने कुनै काम गरेर नै बसेकी छ्यौ होला । आफैंसँग सन्तुष्ट भएर आफैंमा रमाएर ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०९:०७
यात्रानुभूति : हिरोसिमामा खसेको आँसु
भाद्र २८, २०७६ घनश्याम खड्का
मलाई थाहा छैन तेस्रो विश्वयुद्ध कस्तो हतियारले लडिन्छ, तर चौथो विश्वयुद्धचाहिँ निश्चय नै लाठा र ढुंगामुढाहरूबाट लडिनेछ  । –आइन्सटाइन हिरोसिमाको शान्ति स्मारकमा गत साता पुगेपछि मलाई आइन्सटाइनको ज्यादै सम्झना हुन गयो  ।
परमाणु बमको सूत्र पत्ता लगाउने यस शताब्दीका यी महान् वैज्ञानिकलाई हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको परमाणु अस्त्रको प्रयोगले अतिशय पछुतो भएको थियो किनभने उनले नै त्यतिबेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजबेल्टलाई यस्तो हतियार बनाउन सहमति दिएका थिए ।
अणु बमको विनाशकारी प्रयोगपछि हिरोसिमा र नागासाकी निमेषमै खरानीमा परिणात भएको थियो । यो देखेपछि आइन्सटाइनले आणविक बम बनाइयोस् भनी रुजबेल्टलाई लेखेको पत्रमा गरेको हस्ताक्षर आफ्नो जीवनको महाभूल भनेका थिए, जसलाई न्युयोर्क टाइम्सले १९ अगस्ट १९४६ को अंकमा छापेको छ । तेस्रो विश्वयुद्धमा आणविक अस्त्रको प्रयोग निश्चय नै हुने र त्यसले मानव सभ्यतालाई नामेट पार्ने भय देखेपछि आइन्सटाइन चौथो विश्वयुद्ध (मान्छे बाँचे भने) चाहिँ आदिम युगमा झैं लाठा र ढुंगामुढाले लड्नुपर्ने अवस्था आउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
स्कुले विद्यार्थी छँदै सुनेको उनको उपरोक्त वचनको मर्म त्यस क्षण बढी प्रस्टसँग खुलेजस्तो भएको थियो । सन् १९४५ को अगस्ट ६ मा जापानको हिरोसिमामा खसेको ‘लिटल ब्वाई’ र त्यसको तीन दिनपछि नागासाकी सहरमा खसेको ‘फ्याट म्यान’ ले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त त गरायो, तर त्यस घातक आणविक हमलाले मान्छेको मनमा पारेको घाउ अनि उमारेको डर भने अहिले पनि उस्तै छ, शान्ति स्मारकको अवलोकन गरेपछि यस्तै लाग्छ ।
अणु बमको दुस्प्रभाव कतिसम्म पर्दोरहेछ भन्ने तथ्यलाई स्मारकले सकेसम्म सम्प्रेष्य हुने गरी तस्बिर र भग्नावशेषहरू राखेर देखाउन खोजेको छ । हिरोसिमाभन्दा ३ सय मिटरमाथिको आकाशमा खसेको बमले त्यस सुन्दर सहरलाई केही मिनेटमै बलिरहेको आगाको डल्लोमा परिणत गरिदियो जसका कारण एक लाख ४२ हजार मानिसको ज्यान गयो ।
स्मारक छिर्नुअघि भित्तामा मानिसहरू मुस्कुराइरहेको, सडकमा मोटरहरू गुडिरहेको र बच्चाहरू मुस्कुराइरहेका तस्बिर छन् । बम खस्नु ठीकअघिको हिरोसिमा हो यो । त्यसपछि ढोकामा बडेमानको चित्र छ घडीको जसमा बिहानको आठ बजेर १५ मिनेट पुगेपछि समय रोक्किएको छ । यही क्षण त हो संसारको पहिलो आणविक बम विस्फोट भएको । त्यसपछि हिरोसिमाका मानिसहरूमा के गुज्य्रो होला ? त्यसको ठीकठीक वर्णन त जति नै गरे पनि सम्भव छैन । र पनि, त्यस नारकीय समयले दिएको त्रासदी र अवर्णनीय पीडाको सानो झल्को दिने वस्तुहरू भित्र छन्, आउनुस् भित्र जाऊँ एक क्षण ।
ठूलो हलको माझमा एउटा उभिएको चम्किलो विद्युतीय मण्डल तपाईं देखिरहनुभएको छ ? यो हो त्यस क्षणको शान्त हिरोसिमा । अब हेर्नुस्, आकाशमा केही उड्दै आइरहेको छ । त्यो तीव्र गतिमा सहरतिर नजिकिँदै छ । केही क्षणमा त्यसले कुनै चम्किलो वस्तु आफूबाट झार्‍यो । भुइँमा खस्न नपाउँदै त्यो हजार सूर्यको तेज निकाले जसरी विस्फोट भयो । अहो, पूरै सहरलाई आगाको लप्काले ढाक्यो अब ! आगाको विशाल रोटी लाखौं टाउकामाथि एकैपटक बस्न आयो भने कस्तो होला ? निश्चय नै, जीउबाट मासु पग्लिएर खस्न थाल्छ, रगत नसामै सुक्छ र मान्छे क्षणमै खरानी हुन्छ । अहो, कस्तो भयानक !
यी हेर्न्स्,ु पारदर्शी कक्षहरूमा राखिएका पग्लिएका फलाम र सिसाका आकारहीन डल्लाहरू । यी वस्तु त्यस बेला पग्लिएका धातुहरू हुन् । यहाँ भित्तामा टाँसिएको चित्रभित्र नदीमा लाखौंलाख मान्छे पसिरहेको देख्नुहुन्छ ? जीउ पग्लिन थालेपछि चिसोको खोजीमा जाने ठाउँ नै सहरको बीचमा भएको त्यही एक नदी त थियो नि ! कठै, नदी भने आफैं छट्पटिएर उम्लिरहेको र बाफ बनेर उडिरहेको थियो । तीन हजार डिग्री सेल्सियसको त्यो तातोमा शीतल कुरा कहाँ थियो र !
कक्षामा भर्खरै पसेका केटाकेटीहरू भवनसहितै पग्लिए, एउटा बालकले आफ्नो दसौं जन्मदिवसका दिन पाएको साइकल पग्लिँदा पग्लिँदै पनि काखी च्यापेर बसिरह्यो । त्यो खिइन बाँकी साइलकजस्तो फलामलाई तपाईं पग्लिरहेका मान्छेको चित्र मुन्तिर देख्न सक्नुहुन्छ । तस्बिरहरू मुन्तिरको प्रदर्शनीमा आगाको रापले डढेका बालकहरूका केही टुक्रा लुगा पनि देख्न सक्नुहुन्छ । बम खसेको ठाउँको पाँच किलोमिटरको वृत्तमा सबै मानिस यसरी नै पग्लिए र जमिनमा पछारिन नपाउँदै ती ज्वालामुखी फुटेर बगिरहेको लाभाजस्ता राता खरानी बनेर जमिनमा फिँजिए ।
पाँच किलोमिटरभन्दा परतिरचाहिँ मानिसहरू पग्लिहालेनन्, जले मात्रै । घाइते भए र बाटामा लडे । तिनको शरीरबाट मासु पोल्दा आउने अनौठो गन्ध आउन थाल्यो र पूरै सहरमा त्यो व्याप्त भयो । दुई दिनसम्म यसरी हिरोसिमा जलिरह्यो अनि बिस्तारै त्यो कालो कोइलामा परिणत भयो ।
हेर्दाहेर्दै हिरोसिमा कहिल्यै बस्ती नै नभएको ठाउँजस्तो निर्जन र खण्डहर भयो । त्यसै क्षण जलेका ७० हजार मानिसका खरानीमाथि कैयौं दिन छटपटिएका हजारौं मानिसले त्यस दग्ध जीउको पीडाबाट विश्राम लिए र आधा जलेको मुढोजसरी पसारिए । सहरको कुनाकुनामा चाहिँ घाइतेहरू र भोकले रन्थनिएकाहरू शोकको अतिरेकमा पानीको खोजीमा लागे ।
त्यसैबेला, ऊ हेर्नुस् चित्रमा, भयंकर वर्षा भयो ! तर, पानी कालो थियो, ठूलठूला थोप्लाहरू भएको । घाइतेहरूले जिब्रो निकाले, त्यस अनौठो कालो पानीको केही थोपाबाट अलिकति भए पनि तिर्खा मेट्न खोजे । तिनलाई त्यस बेला यो युरेनियमको वर्षा हो, त्यसबाट जोगिनुपर्छ भनेर सम्झाउने को थियो र !
त्यस कालो वर्षाले बाँच्नेहरूको जीउमा हजार नर्कहरूको पीडा छाडेर गयो । त्यसपछिका हरेक दिन, हप्ता, महिना र वर्षहरूमा मानिसहरूको जीउमा क्यान्सर देखिन थाल्यो, फुतुफुतु हरेक दिन कोही न कोही मर्न थाल्यो । असह्य पीडाले कतिपयले आत्महत्या गरे । कतिपयले त्यति पनि गर्न नसक्ने अवस्थमा आफूलाई घिसारिरहन बाध्य भए । एउटा बूढो मानिसको चित्रसहितको कथा लौ पढ्नुहोस् जो २१ पटक क्यान्सर लागेर ९३ वर्षको उमेरमा काल पर्खेर बसिरहेको छ ।
‘सबैलाई आउने काल मलाईचाहिँ किन आउँदैन,’ बूढाको एउटै अभिलाषा रहेछ, ‘यसरी बाँचिरहनुभन्दा त त्यसै क्षण मरेको भए हुने, किन मरिनँ होला म ?’
क्यान्सरपीडित हिरोसिमाका मानिसका यस्ता कथा त कति हुन् कति ! अझ दुःखलाग्दो स्थिति त त्यस क्षण गर्भिणी भएका महिलाको छ जसले सग्लो बालक जन्माउनै सकेनन् । यी भित्तामा हेनुस्, एउटी आमाको मुस्कुराइरहेको तस्बिर । उनी बम प्रहार हुँदा हिरोसिमाको एउटा गाउँमा गर्भिणी जीवन बिताइरहेकी थिइन् ।
हावा, पानी र माटो गरी सबै महाभूतहरूमा फैलिएको युरेनियम उनको जीउ, फोक्सो र रगतमा मात्रै होइन, पेटमा हुर्किरहेको छोराको जीउमा पनि मिसिन पुग्यो । परिणामतः बालक मन्दबुद्धिको जन्मियो जसको स्याहारमा ती महिलाको पूरा जीवन खर्च भयो । धेरै वर्षपछि, रेडियमको विकिरणले दिएको असह्य पीडाले उनको छोराको ज्यान लियो । छोरो बितेको दुई महिनामा आमाले पनि चोला बदलिन् । छोराकै मायाले उनलाई विकिरणले ल्याएको क्यान्सरले पनि मार्न सकेको थिएन । अहो मातृ शक्ति !
आणविक बमपछि कष्टकर जीवन बाँचिरहेका एक–एक मान्छेका तस्बिर र कथाहरू शान्ति स्मारकका निर्देशकले भन्दै गर्दा मेरा आँखा बर्सिरहे । संयमित हुन खोज्दाखोज्दै पनि हरेक मान्छेलाई त्यहाँ पुगेपछि भक्कानो छाडेर रुन मन लाग्दो रहेछ ।
‘हामीले भोगेको पीडा कुनै पनि भाषामा भन्न सकिने कुरा होइन, न सम्पूर्ण रूपमा शब्दले यसलाई बुझाउन सक्छ,’ त्यस आणविक हमलामा बाँच्ने थोरैमध्येकी एक केइको ओगुरा भन्दै थिइन्, ‘आज पौने सय वर्षपछि तस्बिरमा हेर्दा त तपाईं यसरी रुनुभयो, हामी त्यसै क्षणमा यो नरक भोग्नेलाई कस्तो भयो होला ?’
बयासी वर्षीया ओगुराले त्यस क्षणलाई सम्झिरहँदा सिंगो स्मारकले देखाउन खोजेको समयको तस्बिर थप प्रस्ट हुँदै गएजस्तो अनुभव हुन्थ्यो । बम हमला हुँदा आठ वर्षकी उनी त्यस दिन स्कुल गएकी भए अरू साथीसँगै खरानी हुने रहिछन् । केही दिनदेखि आकाशमा अनौठोसँग घुमिरहेको अमेरिकन जहाजलाई देखेर त्यस क्षण उनका बाबुले ओगुरालाई भनेका रहेछन्, ‘आज स्कुल नजाऊ, पक्कै केही अनिष्ट हुनेवाला छ ।’
त्यस भयानक क्षणको पूर्वाभास पाएर हो वा किन हो, केही दिनअघि नै उनका बाबुले सहरभन्दा पर बसाइ सारिेसकेका थिए ।
‘त्यहाँ नसरेको भए त स्कुल नगए पनि म मर्ने रहिछु नि,’ ओगुरा भन्छिन्, ‘धन्न, संयोगले हामी बाँच्यौं, हाम्रो परिवारलाई नै केही भएन ।’
ओगुरालाई झैं बमले सीधासीधा क्षति नपुर्‍याएका ‘भाग्यमानी’ हिरोसिमावासीलाई पछि बिहा गर्न गाह्रो हुन थाल्यो । बम खसेको सहरको मानिस भनेपछि बोल्नसमेत पनि तर्किनेहरू भए । यसले गर्दा ओगुरा आफ्नो गोप्यता भंग नहोस् भनेर चालीस वर्षको उमेरसम्म चुप लागिन् । बिहा गरिन् र घर व्यवहार सम्हालेर जीवनको गुप्त घाउलाई कसैले नदेख्ने गरी सम्हालेर राखिन् । उनको पहिलो सन्तान मृत जन्मियो ।
‘मेरा आँखा हतपत त्यस मरेको बालकका औंलाहरूमा गयो,’ ओगुरा भन्छिन्, ‘उसका औंला दसका दस थिए, त्यो देख्दा मलाई केही खुसी पनि लाग्यो ।’
युरेनियमको प्रभावका कारण बच्चाहरूको औंला ६ वटा हुने र शारीरिक रूपले पनि अस्वस्थ देखिने बेला थियो त्यो । आफ्नो छोरा मरे पनि सबलाङ्गै भएको कुराले उनलाई राहत दियो । त्यसपछि उनले सग्लो छोरा जन्माइन् । केही वर्षपछि पति बिते ।
‘त्यसपछि भने मलाई पीडा सहेर होइन, भनेर ठीक पार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, अनि म आफ्ना कुरा भन्नतिर लागेँ ।’
त्यसपछि उनले अंग्रेजी सिकिन्, आफ्नो कुरा संसारलाई भन्न थालिन् । अमेरिका, युरोप सबैतिर पुगेर उनले दोस्रो युद्धको समयमा भएको ज्यादतीबारे बोलिन् । ‘हिरोसिमा इन्टरप्रेटर्स फर पिस’ भन्ने संगठन स्थापना गरेर त्यसको निर्देशकका रूपमा उनी तीन दशकदेखि यसबारे बोल्दै आइरहेकी छन् । संसारमा आणविक निशस्त्रीकरण कति जरुरी छ भनेर मानिसहरूलाई थाहा दिन जरुरी भएकाले आफू लागिपरेको उनी बताउँछिन् ।
हिरोसिमामा युरेनियमबाट बनेको अणु बम खसालिएको थियो जसले पूरै सहरलाई ध्वस्त पार्‍यो । त्योभन्दा पनि शक्तिशाली प्लेटोनियम बम नागासाकीमा खसालियो लगत्तै । हिरोसिमामा झैं सहरको मध्यभागमा त्यो बम खसालिएको भए लाखौं मानिस त्यसले मार्ने थियो तत्क्षणै । तर, निर्जन पहाडमा खसाल्दा पनि त्यसले ४० हजारको ज्यान लियो । दोस्रो बम ज्यादा शक्तिशाली भएको पुष्टि भएपछि आज संसारैभर प्लेटोनियमयुक्त आणविक हतियार बनाउने होड चलेको छ ।
स्टक होम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिका, रसिया, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल र उत्तर कोरिया गरी ९ देशसँग जम्मा गरी हाल विश्वमा १३ हजार ८ सय ९० आणविक हतियार छन् ।
‘यी प्रत्येक हतियार हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएका हतियारभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली भएकाले पृथ्वीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमताका छन्,’ ओगुरा भन्छिन्, ‘त्यसो हुनाले यी हतियारलाई नास गर्नुपर्छ, जसरी पनि आणविक युद्धबाट संसारलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसैले म यो बूढो उमेरमा पनि बोलिरहेको छु ।’
इतिहासबाट सिक्नुपर्छ र हिरोसिमाबाट शान्ति कति आवश्यक कुरा रहेछ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भन्ने उनको आवाजमा अचम्मको आग्रह छ समग्र मानव समुदायप्रति । आणविक हमलाको यो अत्यासलाग्दो इतिहास साक्षात्कार गरेपछि र ओगुराको कथा सुनिसकेपछि स्मारकबाट बाहिर निक्लँदा आँखामा डिजिटल घडीजस्तो एउटा स्तम्भ देखा पर्छ जसको माथिल्लो स्क्रिनमा हिरोसिमामा बम आक्रमण भएको दिन गन्ती भएको अंक र तल्लो स्क्रिनमा आणविक हतियारको पछिल्लो परीक्षण भएयताको दिनको गन्ती अंकित छ ।
म त्यहाँ पुगेको गत ६ सेप्टेम्बरका दिन हिरोसिमामा बम खसेको २७ हजार ६० दिन पुगेको रहेछ अनि पछिल्लो आणविक परीक्षणचाहिँ २ सय ६ दिनअघि भएको रहेछ । त्यस स्तम्भको छेवैमा हिरोसिमाका मेयर मात्युई काजुमीले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हालै लेखेको पत्र सिंगमर्मरको प्लेटमा राखिएको छ जसमा उनले संयुक्त राज्यले गत फेब्रुअरीको १३ तारिखका दिन गरेको आणविक बम परीक्षणको विरोध गरिएको छ ।
हिरोसिमामा आणविक बम प्रहारले गर्दा भएको क्षतिलाई बुझेर यस्ता हतियारको थप उत्पादन नगर्न ट्रम्पका नाममा लेखिएका यो पत्रभन्दा पूर्वतिर ज्यान गुमाएका सबै नागरिकको समाधिस्थलमाथि अविच्छिन्न बलिरहने आगाको लप्का छ । संसार आणविक अस्त्रबाट मुक्त भएका दिन मात्रै यो ज्योतिलाई निभाउने जापानको योजना सुन्दा शान्तिको एक मौन तर सबभन्दा प्रस्ट पुकार सुनेझैं लाग्छ ।
हरेक वर्ष दस लाखको हाराहारीमा संसारभरबाट हिरोसिमाको यो स्मारकमा आउनेहरू इतिहासको त्यो क्षणलाई सम्झाउने प्रमाण र प्रयत्नहरूबाट गुज्रँदै ओगुराको कथा सुनेर त्यस समाधिस्थलसम्म आइपुग्दा त्यसै क्षण संसारमा आणविक हतियार नष्ट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्ने अवस्थामा स्वतः पुग्छ ।
सन् २०१६ को मे २७ का दिन बाराक ओबामाले हिरोसिमा भ्रमण गरे । अणु बम खसेको ठाउँमा पुग्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा उनले त्यहाँ हिरोसिमाबाट सिक्नुपर्छ भन्ने एक भावुक मन्तव्य पनि दिए । तर, अमेरिकाले औपचारिक रूपमा माफी माग्छ भन्ने जापानीहरूको आशा भने त्यस बेला पनि पूरा भएन ।
‘ओबामा त्यहाँ आउने हिम्मत गर्नु नै माफी मागेभन्दा ठूलो कुरा हो,’ ओगुरा भन्छिन्, ‘उहिले कहाँ कसको गल्ती थियो भनेर केलाई बसिरह्यो भने झगडै मात्रै भइरहने हुनाले सबै कुरा बिर्सेर एक–अर्कालाई अँगालो हाल्न सकेकै राम्रो हो । त्यसैले म अमेरिकालाई दोष दिन्नँ, जापानले गरेको गल्तीलाई कोरिया र चीनले पनि यसैगरी माफी दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु ।’
यत्रो विध्वंसका बाबजुद ओगुराको शान्त वाणी अनि संयमित भाव देख्दा उनप्रतिको श्रद्धा त्यसै त्यसै चुलिएर आउँदोरहेछ । ओगुराजस्ता क्षमाशील हृदय भएका जापानी जनताले दिनरात पसिना बगाएर खण्डहर हिरोसिमालाई त्यहाँ कहिल्यै केही भएकै थिएन जस्तो विकास र समृद्धिले चिटिक्क पारेका छन् । हिरोसिमाले शान्तिको कामना त गरेको छ नै, बितेको सबै कुरा बिर्सेर आउने दिनलाई रामो पार्न अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०९:५२